कोरोनाको तेस्रो लहर : के गर्दैछ स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर? – Health Post Nepal
२०७८ साउन १२ गते १४:०२
केही दिनदेखि फेरि देशभरि नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमित बढेपछि अहिले देशव्यापी रुपमा कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारी के छ भन्ने चासो बढ्न थालेको छ। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा के-कस्तो तयारी भइरहेको छन? स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल के छ?’ भन्ने प्रश्नहरु जताततै चर्चाको विषय बन्न थालेका छन्।
देशभरि जस्तै भक्तपुर जिल्लामा पनि तुलनात्मक रुपमा कोरोना संक्रमणका केशहरु बढिरहेका छन्। निषेधाज्ञा खोल्नुभन्दा अगाडि ४ सय संक्रमित थिए। अहिले भक्तपुरमा ८०८ सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
भक्तपुर जिल्लामा तेस्रो लहरको लागि कस्तो छ तयारी?
स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारकाअनुसार तेस्रो लहरको तयारीको कुरा गर्नु भन्दा पनि संक्रमणको अवस्था रोक्नतर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ। ‘रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु जाति’ भन्ने नेपाली भनाई जस्तै नयाँ संक्रमण आउनै नदिने तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने मिजार बताउँछन्।
उनले कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेकै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, स्यानिटाइज गर्ने वा साबुन पानीले हात धुने नै रहेको सुनाए। साथै जमघट धेरै नगर्ने, भिडभाड भएर नबस्ने, काम नपरेको खण्डमा बाहिर ननिस्कनेलगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने उनले बताए।
‘तेस्रो लहरको तयारी के छ त?’, भन्ने आयोमेलको प्रश्नमा उनले भने, ‘तेस्रो लहरमा के को समस्या हुन्छ, के लक्षण देखापर्छ, केही थाहा नभइ के को तयारी गर्ने? दोस्रो लहरमा अक्सिजनको कमी भयो, त्यो पनि कसैलाई थाहा थिएन। बिरामी भइसकेपछि मात्र थाहा भयो। अहिले त्यसैकारण अधिकांश अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिसकेको अवस्था छ। तेस्रो लहरमा अरु नै केही हुने हो कि?’
‘तेस्रो लहरमा बच्चाहरुलाई पनि असर गर्छ भनिएको छ। तर, के असर गर्छ त भनेर केही प्रमाणित लक्षण नभएको कारण तयारी के मा गर्ने त?’, उनले अगाडि भने। तेस्रो लहरमा यस्तो लक्षण हुन्छ है भन्ने अग्रिम जानकारी भएको भए त्यसमा तयारी अवस्थामा बस्न सकिने उनको भनाई छ।
मिजार सरकारले शून्य कोरोना संक्रमित भइसकेपछि मात्र लकडाउन वा निषाधाज्ञा खोल्नुपर्ने बताउँछन्। साथै उनले कोरोनाको लहर कम भएपछि निषेधाज्ञा खोल्दा जमघट, भोजभतेर हुन थालेपछि संक्रमण झनै बढेको बताए।
अहिले तयारीस्वरुप स्थानीय तहले अस्पतालमा आइसियु, एनआइसियु, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए। भक्तपुरको नेपाल-कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल, ख्वप अस्पताल, चाँगुनारायण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भइसकेको उनले जानकारी दिए। अहिले भक्तपुरका ३० प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेको मिजारले बताए।